एक बच्चा मा वाकवाकी कारण एक नम्बर हुन सक्छ। यो अवस्था सबैभन्दा अक्सर पाचन प्रणाली समस्या प्रकुपित छ। तर, कारण अरूलाई हुन सक्छ। एक बिरामी बच्चा भने - के यो स्थितिमा के गर्ने? हामी हाम्रो लेख सिक्न।
विषाक्तता सामान्यतया यसको संरचना जीव लागि हानिकारक पदार्थ मा समावेश एक बच्चा गरिब खाना को खपत पछि हुन्छ। एक यदि बिरामी बच्चा, यो अवस्थामा के गर्ने? डाक्टर निर्जलीकरण जोगिन थप पिउन विषाक्तता मा सुझाव दिन्छौं। तरल प्राय इन्जेस्टेड गर्नुपर्छ, तर सानो रकम मा। यो अवस्था छैन ज्वरो र अन्य खतरनाक कारक सँगसँगै छ भने - sorbents ( "Polisorb" Enterosgel, "" Atoxil "," Smecta ", सक्रिय कोइला) दिइएको गर्न सकिन्छ। यदि सम्भव छ भने, यी औषधिहरू प्रयोग गर्नु अघि गैस्ट्रिक lavage हुन वा उल्टी (जिब्रोले मूल धक्का) induce गर्नुपर्छ।
विषाक्तता ज्वरो, लगातार सँगसँगै छ उल्टी र पखाला, यो डाक्टर गर्न तत्काल उपचार आवश्यक छ। यस मामला मा, वहाँ एक आंतों संक्रमण र गम्भीर निर्जलीकरण को विकास भएको एक संभावना छ।
बच्चा खाने पछि sickened? सायद उहाँले pereel वा धेरै फैटी खाद्य पदार्थ स्वाद। एक प्रारम्भिक उमेर मा शरीर बच्चा अहिलेसम्म यस्तो भोजन सामना गर्न सक्षम छ। कारण यो हो भने, कि वाकवाकी छोटो र एकल छ। यस मामला मा, बच्चा अत्यधिक पहनने देखि शरीर खाली, पूर्ण आराम दिनुपर्छ। आंत्र समारोह बहाल गर्न, तपाईं एक घडीको दिशामा दिशा मा आफ्नो पेट PAT गर्न सक्नुहुन्छ।
एक यदि बिरामी बच्चा, यो अवस्थामा के गर्ने? डाक्टर एक चौथाई ट्याबलेट, "Festal", "mezim" वा "Almagel" को आधा चम्मच दिन सुझाव दिन्छौं। अझ बच्चालाई हानि छैन ताकि निर्देशनहरू पढ्नुहोस् लिएर अघि।
र बच्चा बिरामी र पेट दुख्यो भने - यो अवस्थामा के? यहाँ, एक आंतों संक्रमण हुन सक्छ। यो अवस्था तीव्र गतिमा गुणन र अन्य महत्वपूर्ण जीवाणुहरु को काम बाधा सुरु कि जठरांत्रिय पर्चा रोगजनकों को प्रवेश कारण छ। रोग द्वारा निम्न लक्षण सँगसँगै छ:
उपचार बाहिर जीवाणुहरु को प्रकार मा निर्भर गर्दछ, केवल एक चिकित्सक को पर्यवेक्षण अन्तर्गत लगे छ। रोग संग आफ्नै संघर्ष किनभने गंभीर निर्जलीकरण विकास को उच्च सम्भावना को सिफारिस गरिएको छैन।
लामो यात्राको समयमा बिरामी बच्चा के भने? यो vestibular उपकरण को कमजोरी देखाउँछ। यस मामला मा, तपाईं बच्चा ताजा हावा छिटो ल्याउन गर्नुपर्छ। यो उहाँलाई चाँडै फिर्ता बाउन्स गर्न मद्दत गर्नेछ।
को यात्रा अघि, खाने अनुमति छैन। बाटो मा कागति वा अमिलो स्याउ को स्लाइस को एक जोडी लिन निश्चित हुन। यस मामला मा प्रशस्त मात्रामा पिउन सिफारिस गरिएको छैन। यो सानो अंश मा एक तरल दिन राम्रो छ। यदि सम्भव छ भने, तपाईंको बच्चा वाहन को सामने मा एक स्थान दिन, त्यसैले उहाँले सडक मा गाडीको अगाडीको शिशा मार्फत हेर्न मौका थियो।
बिरामी बच्चा, र आँसु भने - के? सामान्यतया, स्नायविक रोगहरु सँगसँगै बिहान वाकवाकी, द्वारा बारम्बार उल्टी, उच्च ज्वरो, गंभीर टाउको दुखाइ र पनि convulsions।
यस्तो अवस्था गम्भीर छलफल र एक चिकित्सक को तत्काल हस्तक्षेप आवश्यक छ।
के भने बिरामी बच्चा र शरीर तापमान उच्च, खराब टाउको दुखाइ छ र त्यहाँ दाबीले उल्टी छ? यस्तो लक्षण वृद्धि संकेत हुन सक्छ intracranial दबाव। नियम, यो राज्य चोट, सुनिंनु को उपस्थिति मस्तिष्क मा, रक्तस्राव, टाउको गर्न ट्यूमर कारण उत्पन्न हुन्छ।
जब माथि लक्षण तत्काल चिकित्सा ध्यान खोज्नुपर्छ।
तीव्र appendicitis पनि बिरामी बच्चा यदि उत्पन्न गर्न सक्छ? यो स्थितिमा के गर्ने? यो रोग वाकवाकी कारण छ कि छैन बुझ्न सुरु गर्न। सही र तल्लो पेट को केन्द्रीय भागहरु, लगातार उल्टी, ज्वरो मा तीव्र दुखाइ - यी सबै सुविधाहरू appendicitis उपस्थिति को विशेषता हो। यो रोग जरुरी शल्य चिकित्सा हस्तक्षेप आवश्यक छ।
पेट मा एक विदेशी शरीर को प्रवेश
यो उमेर मा एक बच्चा त अक्सर केही वस्तु पेट छ, "दांत गर्न" सबै प्रयास गर्न प्रयास गरिरहेको छ। के यो कारणले बिरामी बच्चा भने? ठूलो आकार वस्तुको घूस र अक्सर अप्रिय sensations गर्न जान्छ। यो पेट को चिल्लो मांसपेशीमा को spasm कारण हो।
यस मामला मा बच्चा undigested खकार वा रगतको उपस्थिति उल्टी गर्न सुरु हुन्छ। कहिलेकाहीं त्यहाँ तीव्र साँस र अत्यधिक लालास्रवण हुन सक्छ। यस्तो लक्षण को खोज मा तत्काल चिकित्सा ध्यान खोज्नुपर्छ। धेरै कम आत्म मा संलग्न यस मामला मा प्रतीक्षा, यो सिफारिस गरिएको छैन।
वाकवाकी अन्य कारणहरू साथै, बच्चा मा अवलोकन गर्न सकिन्छ:
स्वागत लागूपदार्थ, एन्टिबायोटिक;
गिल्बर्ट गरेको सिंड्रोम र टी। डी।
के बच्चा बिरामी भने?
यदि वाकवाकी अन्य लक्षण सँगसँगै छ, त्यसपछि तपाईं आफ्नो आफै गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईं बच्चा गरिब गुणस्तर खाना विष थियो पक्का हो भने, यो मामला मा यो आवश्यक अनावश्यक सामग्रीको पेट जारी छ। यो, न्यानो उसिनेर पानी Napo बच्चा प्रशस्त गर्न र भाषा फिर्ता धक्का। पेट पूर्ण निःशुल्क हुँदा - को sorbent दिनुहोस्।
यो कोठा सुन्दर हुनुपर्छ भनेर उल्लेख गर्नुपर्छ। कहिलेकाहीं न्यानो र सुख्खा हावा स्थिति बढन। कुनै मामला मा तात्दै रोक्न हुँदैन।
को वाकवाकी बच्चालाई खुवाउन प्रयास पछि यो आवश्यक छ। मात्र पानी - पहिलो दिनमा, विशेष गरी विषाक्तता पछि, यो खाना दिन छैन (- बिस्कुट तपाईं कडा चाहनुहुन्छ भने) राम्रो छ। पानी purified र गैर-Carbonated हुनुपर्छ।
यदि बच्चा बिरामी के गर्न? आक्रमण गर्ने कमजोर र जडीबुटी को decoctions हटाउन मद्दत गर्नेछ। यस मामला मा, सबै भन्दा प्रभावकारी chamomile र टकसाल मानिन्छ। चम्मच जडीबुटी उम्लिरहेको पानी एक गिलास बनाउन र आधा एक घण्टा Infuse गर्नुपर्छ। यो विधि बिरामी बच्चा (2 वर्ष) मामला मा राम्रो तरिकाले अनुकूल छ कि उल्लेख गर्नुपर्छ। बच्चा साना के हो भने? छोराछोरीको स्टोर र औषधि पसल यो स्थिति को लागि उपयुक्त उमेर को लागि अभिप्रेरित विशेष चाय बेचन।
यस्तो "metoclopramide", "Reglan" रूपमा विरोधी वाकवाकी लागूपदार्थ, सन्दर्भमा, तिनीहरूले मात्र आक्रमण राहत, तर यो अवस्था को घटना को मूल कारण उपचार छैन। यसबाहेक, केही जवान बालबालिकाको लागि contraindicated र तिनीहरूलाई दिन आफ्नै डाक्टर छैन छन्।
बिरामी बच्चा, र आँसु भने, के गर्ने? यो प्रश्न धेरै आमाबाबुले खडा छ। डाक्टर आत्म-medicate छैन सिफारिस र तुरुन्तै समयमा निदान र उचित उपचार गर्ने सल्लाह दिन्छन् जो एक विशेषज्ञ, हेर्नुहोस्।
दबाइ बच्चाहरु को लागि "एसीसी"। प्रयोगको लागि निर्देशन। औषधिको खुराक र Contraindications
कृत्रिम खानामा बच्चाहरूलाई खुवाउने: आधारभूत नियम
नवजात शिशुहरु लागि "CANDIDE"। "स्पष्टवादी" नवजात शिशुहरु लागि (समाधान)
नवजात शिशुहरु लागि खाम "निद्रा लागेको जिनोम": न्यानोपन र सान्त्वना
प्रोटोटाइप2सिस्टम आवश्यकताहरु र खेल समीक्षा
व्यापार गतिविधि को विश्लेषण
ओवन मा Tilapia: व्यञ्जनहरु
सकारात्मक व्यक्ति सल्लाह, वा कसरी आफ्नो आत्मा जुटाउने
Tenerife को सबै भन्दा राम्रो समुद्र तट - तिनीहरूले के हुन्?